Airbus: ụgbọ elu 39,000 ọhụrụ, ndị ọkwọ ụgbọ elu 550,000 chọrọ site na 2040
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Airbus: ụgbọ elu 39,000 ọhụrụ, ndị ọkwọ ụgbọ elu 550,000 chọrọ site na 2040
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • investments • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Sustainability News • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ịla ezumike nká nke ụgbọ elu meworo agadi iji mee ngwa ngwa, na-achọ nke nta nke nta ka ọ bụrụ onye nnọchi anya, na-akwado ebumnuche decarbonization nke ụlọ ọrụ ahụ.
Achọ maka njem ụgbọ elu ga-aga n'ihu na-eto eto, nke GDP na-akwalite, ịrị elu nke etiti na ọchịchọ ịchọpụta na jikọọ.
Ọganihu na-aga n'ihu na arụmọrụ ụgbọ mmiri, mmanụ ọkụ na-adigide, ọrụ na teknụzụ na-akpali akpali ga-eme ka ebumnobi net-efu 2050 nke ngalaba ahụ nwee ike.
Achọrọ ihe karịrị ndị ọkwọ ụgbọ elu 550,000 na ndị ọrụ nka 710,000 nwere oke nka n'ime afọ 20 na-esote.
N'ime afọ 20 sochirinụ, Airbus amụma na-achọ ka a na-ebuga ụgbọ elu iji jiri nwayọọ nwayọọ si n'ọganihu ụgbọ elu gaa n'ịla ezumike nká ngwa ngwa nke ụgbọ elu ndị agadi na-adịchaghị mma, na-akpata mkpa ihe dị ka ndị njem ọhụrụ 39,000 na-ebu ụgbọ elu na ndị na-ebu ibu, 15,250 n'ime ndị a maka nnọchi. N'ihi ya, n'afọ 2040, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụgbọ elu azụmahịa na-arụ ọrụ ga-abụ nke ọgbọ ọhụrụ, site na ihe dị ka 13% taa, na-eme ka arụmọrụ CO2 dịkwuo mma nke ụgbọ elu ụgbọ elu azụmahịa ụwa. Uru akụ na ụba nke ụgbọ elu gafere mpaghara ahụ, na-atụnye ihe dị ka 4% na GDP zuru ụwa ọnụ kwa afọ yana ịkwado ihe dị ka nde ọrụ 90 n'ụwa niile.
Ọ bụ ezie na ọ tụfuru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ nke uto n'ime oge COVID, okporo ụzọ ndị njem egosila nkwụsi ike ya ma na-ahazi ka ọ ga-ejikọta na uto kwa afọ nke 3.9% kwa afọ, nke na-akwalite akụ na ụba na azụmahịa na gburugburu ụwa gụnyere njem nlegharị anya. Ndị otu etiti, ndị kacha nwee ike ife efe ga-abawanye n'ọnụ ọgụgụ site na ijeri mmadụ abụọ ruo 63% nke ndị bi n'ụwa. Mmụba okporo ụzọ kacha ngwa ngwa ga-abụ na Eshia ebe China na-aghọ nnukwu ahịa.
Achọ maka ụgbọ elu ọhụrụ ga-agụnye gburugburu 29,700 Obere ụgbọ elu dị ka ezinụlọ A220 na A320, yana ihe dị ka 5,300 na ụdị ụgbọ elu Ọkara dị ka A321XLR na A330neo. N'ime nnukwu akụkụ, nke A350 kpuchiri, a na-atụ anya ihe nnyefe 4,000 site na 2040.
Achọrọ ibu, nke e-azụmahịa na-akwalite, na-ebute uto a na-atụ anya na ibu awara awara nke 4.7% kwa afọ yana ibu n'ozuzu (na-anọchite anya 75% nke ahịa) uto nke 2.7%. N'ozuzu, n'ime afọ 20 na-abịanụ, a ga-achọ ihe dị ka ndị na-ebu ibu 2,440, nke 880 n'ime ha ga-abụ nke ọhụrụ.
N'ikwekọ na uto, ọrụ ụgbọ elu na-arụ ọrụ nke ọma n'ụwa niile na-abawanye mkpa maka ọrụ ụgbọ elu azụmahịa - gụnyere mmezi, ọzụzụ, nkwalite, ọrụ ụgbọ elu, ịkwatu na imegharị ihe. Uto a na-aga n'ihu Airbus' Ọkwa amụma tupu ọrịa ọrịa na-erute uru mkpokọta ihe ruru $4.8Tn n'ime afọ 20 na-abịa. Ka ọ na-aga n'ihu site na mbelata metụtara COVID nke ihe dị ka 20% n'ime oge 2020-2025, ahịa ọrụ na-amaliteghachi, na-akpalite mkpa ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọ elu 550,000+ na ndị ọrụ nka nka 710,000+ n'ime afọ 20 na-esote. Ọ bụ ezie na mmezi ga-anọgide na-abụ akụkụ ọrụ na-eduga, ụgbọ elu, ọrụ ala na ọrụ na-adịgide adịgide na-atụkwa anya na ọ ga-eto nke ọma.
"Dịka akụ na ụba na njem ụgbọ elu na-eto, anyị na-ahụ ka ọchịchọ na-esiwanye ike site n'iji dochie anya karịa uto. Nnọchi anya ịbụ onye ọkwọ ụgbọ ala kachasị mkpa taa maka nbibi. Ụwa na-atụ anya ka ụgbọ elu na-adịgide adịgide na nke a ga-ekwe omume n'oge na-adịghị anya site na iwebata ọtụtụ ụgbọ elu ọgbara ọhụrụ, "Cristian Scherer, Onye isi azụmahịa na onye isi ụlọ ọrụ kwuru. Airbus Mba ụwa. Ịkwanye ụgbọ elu ọhụrụ a na-arụ ọrụ nke ọma na Sustainable Aviation Fuels (SAF) bụ nnukwu lever na-esote. Anyị na-anya onwe anyị na ụgbọ elu anyị niile - A220, A320neo Family, A330neo na A350 - enwetalarị ikike iji ụgbọ elu na ngwakọta nke 50% SAF, ga-ebili na 100% site na 2030 - tupu ime ZEROe anyị na-esote eziokwu site na 2035. gawa n'ihu."
Ụlọ ọrụ ụgbọ elu zuru ụwa ọnụ enwetala nnukwu uru arụmọrụ, dị ka e gosiri site na 53% mbelata nke ikuku ikuku CO2 zuru ụwa ọnụ kemgbe 1990. Ụdị ngwaahịa Airbus na-akwado ma ọ dịkarịa ala 20% CO2 arụmọrụ uru karịa ụgbọ elu ọgbọ gara aga. N'ihi ihe ọhụrụ na-aga n'ihu na-aga n'ihu, mmepe ngwaahịa, nkwalite arụmọrụ yana nhọrọ dabere na ahịa, Airbus na-akwado ebumnuche ngalaba na-ebufe ikuku iji rute ikuku carbon net-zero site na 2050.